ReBa (Real.Bitcoinauto) - Bitcoin၊ BNB၊ Cake | ရယူပါ။ Bsc အထွက်နှုန်း မွေးမြူရေး
Galaxy Farming (လက်စွဲစာအုပ်)
ReBa သည် Real.BitcoinAuto ပရောဂျက်၏ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သော တိုကင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Binance Smart Chain ရှိ cryptocurrencies (Bitcoin၊ BNB၊ BUSD၊ Cake) ရရှိရန်အတွက် ကမ်းလှမ်းချက်များ။
Galaxy Yield Farm ဖြင့် ReBa၊ Bitcoin၊ BUSD နှင့် Cake တွင် တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်များ ရယူပါ။
Space Autofarm တွင် ReBa တိုကင်များကို လောင်းပြီး BNB၊ ReBa၊ Bitcoin၊ ကိတ်မုန့်ကို ရယူပါ။
Real.Bitcoinauto ပရောဂျက်မှ ရက်ရောမှုအရှိဆုံး ဘင်ဂိုတွင် အဖိုးတန် ReBa တိုကင်များကို ရယူလိုက်ပါ။ လှုပ်ရှားမှု အမှတ်ပေး လက်မှတ်များ ရရှိနိုင်ပါပြီ။
Digi Shop တွင် ReBa တိုကင်များဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရောင်းချပါ။
လူမှုကွန်ရက်များပေါ်တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းမှထူးခြားသောအကြောင်းအရာဖန်တီးခြင်းအထိအမျိုးမျိုးသောအလုပ်များကိုပြီးမြောက်ခြင်းဖြင့် ReBa တိုကင်များကိုရယူပါ။
ReBaswap.finance ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ဖလှယ်မှုဖြင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဝင်ငွေရယူပါ။
ReBa.Adsense ကွန်ရက်တွင် ကြော်ငြာပါ
+ ReBa မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆုကြေးငွေ
တိုကင်အမျိုးအစား: BEP-20 (Binance Smart Chain)
စုစုပေါင်းနှင့် အများဆုံး ထောက်ပံ့မှု- ရေဘ ၁၀
ဖြန့်ဖြူးထောက်ပံ့ရေး: ရေဘ ၁၀
နောက်တစ်ခုသော့ဖွင့်ပါ။ : 21 / 03 / 2022
Minting & Proxy- ✅ မရှိပါ။
21/03/2022 - 3,980,000 ReBa ကိုသော့ဖွင့်ပါ။
21/11/2022 - 3,980,000 ReBa ကိုသော့ဖွင့်ပါ။
21/03/2023 - 1,990,000 ReBa ကိုသော့ဖွင့်ပါ။
21/11/2023 - 1,990,000 ReBa ကိုသော့ဖွင့်ပါ။
21/03/2024 - 995,000 ReBa ကိုသော့ဖွင့်ပါ။
21/11/2024 - 995,000 ReBa ကိုသော့ဖွင့်ပါ။
21/03/2025 - 497,500 ReBa ကိုသော့ဖွင့်ပါ။
21/11/2025 - 497,500 ReBa ကိုသော့ဖွင့်ပါ။
သော့ခတ်ထားသော စုစုပေါင်းတန်ဖိုး = $17.56K
LP များအားလုံးတွင် Galaxy Farm & Space Autofarm တွင် ရပ်တည်ပါ။
ReBa Galaxy အထွက်နှုန်း စိုက်ပျိုးခြင်း (လက်စွဲစာအုပ်)
ငွေဖြစ်လွယ်မှု ပေါင်းကူးများ တွင် ပါဝင်ပါ။ DEX ReBaSwap နှင့် PancakeSwap - ReBa၊ Bitcoin၊ BUSD၊ Cake ကိုရယူပါ။
BSC (metamask၊ trust wallet၊ match wallet စသဖြင့်) ဖြင့် ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
"Approve" ကိုနှိပ်ပြီး ငွေပေးငွေယူကို အတည်ပြုပါ။
လွှဲပြောင်းမှုများ၏ "အတည်ပြုချက်" ကို ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေးအတွက် တိုကင်များပေးပို့ရန် Deposit ကိုနှိပ်ပါ။
ဆုလက်ဆောင်တိုကင်များ မွေးမြူနေစဉ် စောင့်ပါ (လက်ဆောင်သည် ချက်ချင်းစတင်သည်)
"ရိတ်သိမ်းခြင်း" ကိုနှိပ်ပြီး ချက်ချင်း crypto ဆုလာဘ်ကို ရယူလိုက်ပါ။
ReBa Galaxy Farm အတွက် အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များ
ရရှိထားသော cryptocurrency နှင့် အပ်ငွေကို အချိန်မရွေး ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ရေကန်တွင် လောင်းကြေးခွဲဝေမှုပေါ်မူတည်၍ ဆုငွေပမာဏကို အညီအမျှ ခွဲဝေပေးပါသည်။
လယ်ယာငွေဖြစ်နိုင်မှု အပြောင်းအလဲကြောင့် APR ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အပ်ငွေပမာဏပေါ် မူတည်၍ ဆုပေးသောအစုများကို အခါအားလျော်စွာ ဖြည့်ပါသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်သည် လုံးဝဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချထားပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စမတ်စာချုပ်များဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။
ငွေပေးချေမှုများရရှိနိုင်မှုကို စစ်ဆေးနိုင်သည်၊ စမတ်စာချုပ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် APR တက်ဘ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်အမ်းမှုကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
APR = 64% APY = 89%
ReBa တိုကင်များကို လောင်းကြေးဖြင့် ReBa ရယူပါ။
ReBa Rewards $1000
1 နေ့က 0.17% 1700.0000 ReBa ($1.70)၊
7 ရက်ပေါင်း 1.22% 12,200.0000 ReBa ($12.20)၊
30 ရက်ပေါင်း 5.22% 52,200.0000 ReBa ($52.20)၊
၃၆၅ ရက် (APY)
* နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် 89% 890,000.0000 ReBa ($890.00)၊
လက်ရှိနှုန်းထားများကို အခြေခံ၍ တွက်ချက်ပါသည်။
ကိန်းဂဏန်းများအားလုံးသည် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပြီး သင့်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်သာ ပံ့ပိုးပေးထားပြီး မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ အာမခံထားသောအမြတ်ကို ကိုယ်စားပြုမည်မဟုတ်ပါ။
▫️ ဝင်ငွေ- ReBa
▫️ လောင်းကြေး- ReBa
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $2.38K
APR = 47% APY = 61%
ReBa လောင်းကြေးအတွက် Bitcoin (BEP20) ကိုရယူပါ။ BTCB ၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ
$1000 အတွက် Bitcoin ဆုများ
1 နေ့က 0.13% 0.000037 BTC ($1.30)
7 ရက်ပေါင်း 0.91% 0.000258 BTC ($9.10)
30 ရက်ပေါင်း 3.90% 0.001106 BTC ($39.00)
365 ရက် (APR) 61% 0.017295 BTC ($610.00)
▫️ ဝင်ငွေ- Bitcoin (BEP20)
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $0.84K
APR = 37% APY = 44%
ReBa လောင်းကြေးအတွက် BUSD Stablecoin ကိုရယူပါ။
BUSD Rewards $1000
1 နေ့က 0.10% 1.00 BUSD ($1.00)
7 ရက်ပေါင်း 0.70% 7.00 BUSD ($7.00)
30 ရက်ပေါင်း 3.00% 30.00 BUSD ($30.00)
* နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် 44% 440.00 BUSD ($440.00)
▫️ BUSD ဝင်ငွေ
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $1.43K
APR = 40% APY = 49%
ReBa တိုကင်များလောင်းကြေးအတွက် WBNB ကိုရယူပါ။
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap သို့ပြောင်းပါ။)
$1000 WBNB ဆုလာဘ်များ
1 နေ့က 0.11% 0.0029 BNB ($1.10)၊
7 ရက်ပေါင်း 0.77% 0.0206 BNB ($7.70)၊
30 ရက်ပေါင်း 3.30% 0.0885 BNB ($33.00)၊
* နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် 49% 1.3136 BNB ($490.00)၊
▫️ ဝင်ငွေ- WBNB
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $0.96K
APR = 44% APY = 55%
ReBa ရယူပါ။ နှင့် အတွဲအတွက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်၏ 0,17% ReBaSwap တွင် ReBa + BNB.
ခြံကို 25 နေ့အထိ ဖွင့်ပါသည်။
20/02/2022 -25/02/2022 ကာလအတွင်း၊ DEX စာချုပ်အသစ်များသို့ ကူးပြောင်းမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အလားတူလယ်ယာများကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။ မဖြစ်မနေ အသိပေးချက်ဖြင့် လယ်ယာ၏အဆုံးသတ်ရက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်၊ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါ။
ReBa-BNB ကိုရယူပါ။ ReBaSwap တွင် (ReBaSwap တွင် Liquidity အတွက် Cake LP တိုကင်များကို ရယူပါ)
ကိတ်မုန့်-LP 1 ခု
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုလာဘ်များ မပါဝင်) = 44%
1 နေ့က 0.12% 1,200.00 ReBa ($1.20)၊
7 ရက်ပေါင်း 0.84% 8,400.00 ReBa ($8.40)၊
30 ရက်ပေါင်း 3.60% 36,000.00 ReBa ($36.00)၊
* နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် 55% 550,000.00 ReBa ($550.00)၊
▫️ လောင်းကြေး- ReBa-BNB LP (ReBaswap)
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $1.89K
Bitcoin ကိုရယူပါ။ နှင့် အတွဲအတွက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်၏ 0,17% ReBaSwap တွင် ReBa + BNB.
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုလာဘ်များ အပါအဝင်) 40%
1 နေ့က 0.11% 0.000031 BTC ($1.10)
7 ရက်ပေါင်း 0.77% 0.000218 BTC ($7.70)
30 ရက်ပေါင်း 3.30% 0.000936 BTC ($33.00)
* နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် 49% 0.013893 BTC ($490.00)
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $1.48K
APR = 62% APY = 86%
ReBa ရယူပါ။ နှင့် အတွဲအတွက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်၏ 0,17% ReBaSwap တွင် ReBa + BTCB.
ReBa-BTCB ကိုရယူပါ။ ( Liquidity အတွက် Cake LP တိုကင်များကို ရယူပါ။ ReBaSwap တွင်)
6 076.7722 0.000166
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုလာဘ်များ မပါဝင်) = 62%
1 နေ့က 0.17% 1,700.00 ReBa ($1.70)၊
7 ရက်ပေါင်း 1.19% 11,900.00 ReBa ($11.90)၊
30 ရက်ပေါင်း 5.10% 51,000.00 ReBa ($51.00)၊
* နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် 86% 860,000.00 ReBa ($860.00)၊
▫️ လောင်းကြေး- ReBa-BTCB LP (ReBaswap)
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $1.65K
APR = 113% APY = 209%
WBNB ကိုရယူပါ။ နှင့် အတွဲအတွက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်၏ 0,17% ReBaSwap တွင် ReBa + BTCB.
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုလာဘ်များ မပါဝင်) = 113%
1 နေ့က 0.31% 0.0084 BNB ($3.10)၊
7 ရက်ပေါင်း 2.17% 0.0590 BNB ($21.70)၊
30 ရက်ပေါင်း 9.30% 0.2527 BNB ($93.00)၊
* နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် 209% 5.6780 BNB ($2,090.00)၊
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $0.28K
ReBa ရယူပါ။ နှင့် အတွဲအတွက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်၏ 0,17% ReBaSwap တွင် ReBa + BUSD.
ReBa-BUSD ရယူပါ။ ReBaSwap တွင် (ReBaSwap တွင် Liquidity အတွက် Cake LP တိုကင်များကို ရယူပါ)
(၁၃ ၆၇၂.၀၇၃၀၉ Cake-LP)၊
တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် ဘာသာရပ်။
▫️ လောင်းကြေး- ReBa-BUSD LP (ReBaswap)
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $2.10K
APR = 11% APY = 12%
ReBa ရယူပါ။ နှင့် အတွဲအတွက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်၏ 0,17% ReBaSwap တွင် BNB + BTCB.
ReBaSwap တွင် BNB-BTCB ရယူပါ။ ( Liquidity အတွက် Cake LP တိုကင်များကို ရယူပါ။ ReBaSwap တွင်)
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုလာဘ်များ မပါဝင်) = 11%
1 နေ့က 0.03% 300.00 ReBa ($0.30)၊
7 ရက်ပေါင်း 0.21% 2,100.00 ReBa ($2.10)၊
30 ရက်ပေါင်း 0.90% 9,000.00 ReBa ($9.00)၊
* နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် 12% 120,000.00 ReBa ($120.00)၊
▫️ လောင်းကြေး- BTCB-BNB LP (ReBaswap)
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $0.95K
APR = 88% APY = 140%
Bitcoin ကိုရယူပါ။ နှင့် အတွဲအတွက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်၏ 0,17% ရေဘ + BNB.
ReBa-BNB ကိုရယူပါ။ PancakeSwap တွင် (PancakeSwap တွင် ငွေဖြစ်လွယ်မှုအတွက် Cake LP တိုကင်များကို ရယူပါ)
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုများ မပါဝင်ပါ) 88%
1 နေ့က 0.24% 0.000068 BTC ($2.40)
7 ရက်ပေါင်း 1.68% 0.000476 BTC ($16.80)
30 ရက်ပေါင်း 7.20% 0.002041 BTC ($72.00)
* နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် 140% 0.039693 BTC ($1,400.00)
လောင်းကြေး- ReBa-BNB LP (ပန်ကိတ်)
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $0.98K
ပန်ကိတ်ကို ရယူလိုက်ပါ။ နှင့် အတွဲအတွက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်၏ 0,17% ReBa+BUSD.
ReBa-BUSD ရယူပါ။ (PancakeSwap တွင် ငွေဖြစ်လွယ်မှုအတွက် Cake LP ကို ​​ရယူပါ)
နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း (LP ဆုများ မပါဝင်ပါ) 62%
Pancake Rewards $1000
1 နေ့က 0.17% 0.2168 ကိတ်မုန့် (၃.၅၀ ကျပ်)၊
7 ရက်ပေါင်း 1.19% 1.5174 ကိတ်မုန့် (၃.၅၀ ကျပ်)၊
30 ရက်ပေါင်း 5.10% 6.5033 ကိတ်မုန့် (၃.၅၀ ကျပ်)၊
* နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် 86% 109.6631 ကိတ်မုန့် (၃.၅၀ ကျပ်)၊
▫️ ဝင်ငွေ- ကိတ်မုန့်
လောင်းကြေး- ReBa-BUSD LP (ပန်ကိတ်)
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $0.89K
ReBa + Bitcoin အတွဲအတွက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် BUSD နှင့် 0,17% ကို ရယူပါ။
ReBa-BTCB ကိုရယူပါ။ (PancakeSwap တွင် ငွေဖြစ်လွယ်မှုအတွက် Cake LP ကို ​​ရယူပါ)
6 135.1403 0.0001691
1 နေ့က 0.24% 2.40 BUSD ($2.40)
7 ရက်ပေါင်း 1.68% 16.80 BUSD ($16.80)
30 ရက်ပေါင်း 7.20% 72.00 BUSD ($72.00)
* နေ့စဥ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် 140% 1,400.00 BUSD ($1,400.00)
လောင်းကြေး- ReBa-BTCB LP (ပန်ကိတ်)
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $1.16K
ReBa ရယူပါ။ နှင့် အတွဲအတွက် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်၏ 0,17% ReBaSwap တွင် BNB + BUSD .
BNB-BUSD ရယူပါ။ ReBaSwap တွင် ( Liquidity အတွက် Cake LP တိုကင်များကို ရယူပါ။ ReBaSwap တွင်)
လောင်းကြေး- BNB-BUSD LP (ReBaswap)
▫️ စုစုပေါင်းလောင်းကြေး- $0.27K
ADSense.ReBa Достойная замена Pancake +10% рефбек
Высокий APR для топовых монет. Надёжный DEFI протокол. Реф. программа. Активное сообщество
Digi ReBa ဆိုင်
0,0001 BTC EXMO လက်ဆောင်ကတ်
3300 ရေဘ မရရှိနိုင်ပါ
Android အတွက် YouTube Premium (ကြော်ငြာမပါဘဲကြည့်ရှုပါ)
32 ရေဘ မဝယ်
🎲 Blockchain ထီ	တရားမျှတသည်။	စမ်းသပ်နိုင်သော ကျပန်း	တိုးတက်သော jackpot
~ $ 39
39 479.64 Reba
ဇန်နဝါရီလအတွက် ReBa သတင်း
ငွေရေးကြေးရေးဈေးကွက်တွေ ကြုံနေရချိန်မှာ... နောက်ထပ် ...
💸 airdrop အသစ် +30 ReBa ထပ်ထည့်ထားသည်။ … နောက်ထပ် ...
+ 0.39% (1d)
-9.43% (7 ရက်)